Inqolobane endala eduze ne-Cordes - I-Airbnb
Inqolobane endala eduze ne-Cordes
Loubers, Occitanie, i-France
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Laure
Inqolobane elungisiwe imele ngokuphelele endlini yami. Uzoba nokufinyelela engadini encane nasendaweni yokubhukuda. Konke okudingayo kukhona ku-loft. Iziphuzo eziningi nesidlo sasekuseni ziyatholakala.
I-loft ethokomele endlini endala. Uzoyithanda le ndawo ngenxa yezindawo zayo kanye nedolobhana elithulile. Njengothisha womlando, ngizokunikeza izeluleko ngezindawo ezinhle ongazibona kanye newayini elihle le-Gaillac ozoliphuza.
Ngiyazi kahle umlando wemizana emihle eseduze nendlu futhi ngingakutshela zonke izindawo ezinhle, ezaziwayo noma ezingajwayelekile! Ungakhohlwa amawayini ase-Gaillac, lapho izivini ezikhula ngokujwayelekile zinikeza khona amawayini ekhwalithi.
Ngiyazi kahle umlando wemizana emihle eseduze nendlu futhi ngingakutshela zonke izindawo ezinhle, ezaziwayo noma ezingajwayelekile! Ungakhohlwa amawayini ase-Gaillac, lapho izivini…
Hlola ezinye izinketho ezise- Loubers namaphethelo